အားပေးစကားပြောကြားခြင်း (Cheering someone up) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 4, 2012 at 15:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ညစ်ညူးနေချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ရယ်စရာလေးလာပြောလို့ စိတ်လက်ပြေသွားတဲ့အခါ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမျှဝေနိုင်တဲ့သူဆိုပေမယ့် စိတ်ညစ်စရာကြုံတဲ့အခါမှာလည်း အားပေးစကားပြောတတ်တဲ့သူပေါ့။ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းဆိုတာကို "Friends are the sunshine of life." လို့ John Hay ကပြောခဲ့တယ်။ လူအများစုက သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လောက် တောင့်တကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ကတော့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မပြုမူမိရင် အသွားမရှိတော့ အပြန်လည်းဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ကိုအားပေးစေချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း သူစိတ်မသာယာတဲ့အချိန်မှာ သက်သာရာရအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ ဒါကို cheer up လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမိတ်ဆွေတစ်ယောက် မှိုင်နေတာတွေ့ရင် ကိုယ်ကအားပေးနိုင်အောင် cheer up လုပ်နိုင်မယ့်အသုံးအနှုန်းလေးတွေ လေ့လာကြည့်ကြပါဦး။
Asking aboutaproblem (ဘာပြဿနာရှိလဲမေးခြင်း)
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မျက်နှာမသာမယာဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတာဒီလိုလေးတွေမေးနိုင်ပါတယ်။
What's wrong? (ဘာဖြစ်လို့လဲ)
Is there anything wrong? (တစ်ခုခုဖြစ်နေလို့လား)
Is there anything I can do? (ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ)
Can I help in any way? (ငါ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ကူညီပေးနိုင်မလား)
What's up? (ဘာဖြစ်လို့လဲ)
Describingaproblem (ပြဿနာအားရှင်းပြခြင်း)
ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကို ဒီလို ပြောပြနိုင်တယ်။
Oh, it's nothing. ( သြော် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး)
It's nothing serious. (ဘာမှ အရေးမကြီးပါဘူး)
Oh, it's just that . . . (ဒီလိုဗျ . . .)
I've just had some bad news. (သတင်းဆိုးလေးရထားလို့)
I've just found out that . . . ( . . . လို့ သိလိုက်ရတယ်)
I've decided that . . . ( . . . တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ)
I've just been told that . . . (ငါတော့ . . . အပြောခံလိုက်ရတယ်)
Trying to cheer someone up (တစ်စုံတစ်ဦးအား စိတ်သက်သာအောင်အားပေးခြင်း)
ပြဿနာကိုသိရပြီဆိုရင် သူခံစားနေရတာတွေသက်သာအောင် ဖော့ပြောပေးရတာပေါ့။
Come on, it isn't that bad. (ကဲပါကွာ အဲဒါဒီလောက်လဲမဆိုးပါဘူး)
It could bealot worse. (ဒါတော်သေးတာပေါ့။ ဒီထက်တောင်ဆိုးသွားနိုင်တာ)
It isn't all that bad in the whole scheme of things. (အားလုံးခြုံလိုက်ရင် ဒီလောက်မဆိုးပါဘူး)
Come on, just look on the bright side, you could have . . . (ကဲပါ ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးကြည့်ကြစို့။ မင်း . . . လုပ်နိုင်တာပဲ။)
Every cloud hasasilver lining. (တိမ်တိုက်တိုင်းမှာငွေရောင်အနားသပ်ရှိသည်။) (အဆိုးထဲကအကောင်းတွေ့တတ်ပါတယ်။)
Nothing last forever. (အနိစ္စချည်းပါ။ အဆိုးလဲအမြဲမရှိပါဘူး)
There are plenty more fish in the sea. (တခြားလူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အချစ်ကိစ္စခံစားနေရသူကို တခြားချစ်ရမယ့်လူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့နှစ်သိမ့်နိုင်တယ်။)
It's not all doom and gloom. (ဒီလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူး။ doom and gloom ဆိုတာ အနာဂါတ်ပျောက်နေတာ။ မထူးတော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုး)
Worse things happen at see (It could bealot worse.) (ဒါတော်သေးတာပေါ့။ ဒီထက်တောင်အများကြီးဆိုးသွားနိုင်တာပဲ)
Get over it! (မေ့လိုက်စမ်းပါကွာ။ ထားလိုက်စမ်းပါကွာ)
Just count your blessing. (အကောင်းတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်ရထားတဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုမြင်ကြည့်တာ။ ဖြေတွေးကြည့်တာ)
The future is looking brighter (အနာဂါတ်ကတောက်ပလာပြီ)
သူ့မျက်နှာနည်းနည်းကြည်လာပြီဆိုရင် ရှေ့မှာဘယ်လိုအကောင်းတွေလာတော့မယ်ဆိုတာ အားပေးမယ်။
We've turn the corner. (တို့ တောင်ကျော်လာပြီ။ အခက်အခဲကျော်လာပြီ။)
There'salight at the end of the tunnel. (လမ်းဆုံးတော့ ရွာတွေ့မှာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာအားလုံးကောင်းသွားမှာပါ။)
Things can only get better. (ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်)
It can't get any worse. (ဒီထက်ဆိုးဖို့မရှိတော့ဘူး)
I think we've been through the worst of it. (အဆိုးဆုံးတွေကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။)
အောက်ကစကားပြောခန်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ ပိုပြီးသုံးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။
Denise: Hey Gary, what's up?
Gary: Oh everything.
Gary: My girlfriend dumped melast night. (ရည်းစားကပစ်သွားတယ်)
Denise: Oh no, I'm so sorry. You poor thing! I broke up withaguy once, and he told me "It was horrible."
(အရမ်းခံစားရတယ်။ ဆိုးတယ်) So I can imagine how you must feel. He was devastated (ယူကျုံးမရဖြစ်)-
a bit like you are now, in fact.
Gary: She meant everything to me.
Denise: Cheer up! There are plenty more fish in the sea.
Gary: But none of them will be like her.
Denise: Well, nothing lasts forever. And look on the bright side, you've gotajob you love and . . .
Gary: I got firedthis morning . . . (အလုပ်ဖြုတ်ခံရသည်)
Denise: Oh no ... this is tough! And ironic. . . because I just gotaraise. . . (လစာတိုးပေးခံရသည်) but anyway... Well it obviously can't get any worse.
Gary: Yes, it can. My pet fish died just as I was leaving to come to the bar.
Denise: Wow, you really are havingarun of bad luck.(ကံဆိုးမှုတွေတသီကြီး) But I'm sure the worst is behind you now.
Erm ... did you see that movie(ကြည့်လိုက်သေးလား)on TV last night? The one with Jim Carrey. It was hilarious!
Gary: Jim Carrey was my girlfriend's favourite actor...
Denise: Oh sorry... Erm... You know what I do when I'm feeling low?
Gary: Get drunk?
Denise: No! I think positive thoughts! One I really like, which repeat to myself is, "Anything is possible!"
I find that really puts things in perspective. (အရှိကိုအရှိအတိုင်းမြင်)
Gary: I don't want perspective. I want another drink.
Denise: Also, there are some great motivational quotes by famous people. The writer Alexander Solzhenitsyn once said,
Gary: Yeah, but I bet he never lost his pet fish.
Denise: No, probably not. Come on . .. it's not all doom and gloom. It'sabeautiful day.
Let's go forawalk.(လမ်းလျှောက်ထွက်)
Gary: I hate walking.
Denise: Oh, just get over it will you!
ကဲဒီလိုဆိုရင် အားပေးစကားပြောလို့ရပြီပေါ့။ online ကသူငယ်ချင်းတွေ facebook မှာ စိတ်ညစ်ကြောင်း status တင်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို အခုပဲလက်တွေ့ လေ့ကျင့်ရင်းအားပေး လိုက်ကြပါဦး။
တဈခါတဈလေ စိတျညဈညူးနခြေိနျမှာ တဈယောကျယောကျက ကိုယျ့ကို ရယျစရာလေးလာပွောလို့ စိတျလကျပွသှေားတဲ့အခါ သူ့ကိုကြေးဇူးတငျရမှာပါ။ သူငယျခငျြးဆိုတာ ကိုယျရဲ့ခံစားခကျြကိုမြှဝေနိုငျတဲ့သူဆိုပမေယျ့ စိတျညဈစရာကွုံတဲ့အခါမှာလညျး အားပေးစကားပွောတတျတဲ့သူပေါ့။ ဒါကွောငျ့သူငယျခငျြးဆိုတာကို "Friends are the sunshine of life." လို့ John Hay ကပွောခဲ့တယျ။ လူအမြားစုက သူငယျခငျြးကောငျးတဈယောကျလောကျ တောငျ့တကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျတိုငျ ကတော့သူငယျခငျြးကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျ မပွုမူမိရငျ အသှားမရှိတော့ အပွနျလညျးဘယျဖွဈနိုငျပါ့မလဲ။ ကိုယျ့ကိုအားပေးစခေငျြရငျ ကိုယျကလညျး သူစိတျမသာယာတဲ့အခြိနျမှာ သကျသာရာရအောငျလုပျပေးရမှာပေါ့။ ဒါကို cheer up လုပျတယျလို့ချေါပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစကားပွောမိတျဆှတေဈယောကျ မှိုငျနတောတှရေ့ငျ ကိုယျကအားပေးနိုငျအောငျ cheer up လုပျနိုငျမယျ့အသုံးအနှုနျးလေးတှေ လလေ့ာကွညျ့ကွပါဦး။
Asking aboutaproblem (ဘာပွဿနာရှိလဲမေးခွငျး)
သူငယျခငျြးဖွဈသူ မကျြနှာမသာမယာဖွဈရငျ ဘာဖွဈလဲဆိုတာဒီလိုလေးတှမေေးနိုငျပါတယျ။
What's wrong? (ဘာဖွဈလို့လဲ)
Is there anything wrong? (တဈခုခုဖွဈနလေို့လား)
Is there anything I can do? (ငါဘာလုပျပေးရမလဲ)
Can I help in any way? (ငါ တဈနညျးနညျးနဲ့ ကူညီပေးနိုငျမလား)
What's up? (ဘာဖွဈလို့လဲ)
Describingaproblem (ပွဿနာအားရှငျးပွခွငျး)
ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့ပွဿနာကို ဒီလို ပွောပွနိုငျတယျ။
Oh, it's nothing. ( သွျော ဘာမှမဟုတျပါဘူး)
It's nothing serious. (ဘာမှ အရေးမကွီးပါဘူး)
Oh, it's just that . . . (ဒီလိုဗြ . . .)
I've just had some bad news. (သတငျးဆိုးလေးရထားလို့)
I've just found out that . . . ( . . . လို့ သိလိုကျရတယျ)
I've decided that . . . ( . . . တော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ)
I've just been told that . . . (ငါတော့ . . . အပွောခံလိုကျရတယျ)
Trying to cheer someone up (တဈစုံတဈဦးအား စိတျသကျသာအောငျအားပေးခွငျး)
ပွဿနာကိုသိရပွီဆိုရငျ သူခံစားနရေတာတှသေကျသာအောငျ ဖော့ပွောပေးရတာပေါ့။
Come on, it isn't that bad. (ကဲပါကှာ အဲဒါဒီလောကျလဲမဆိုးပါဘူး)
It could bealot worse. (ဒါတျောသေးတာပေါ့။ ဒီထကျတောငျဆိုးသှားနိုငျတာ)
It isn't all that bad in the whole scheme of things. (အားလုံးခွုံလိုကျရငျ ဒီလောကျမဆိုးပါဘူး)
Come on, just look on the bright side, you could have . . . (ကဲပါ ကောငျးတဲ့ဘကျကတှေးကွညျ့ကွစို့။ မငျး . . . လုပျနိုငျတာပဲ။)
Every cloud hasasilver lining. (တိမျတိုကျတိုငျးမှာငှရေောငျအနားသပျရှိသညျ။) (အဆိုးထဲကအကောငျးတှတေ့တျပါတယျ။)
Nothing last forever. (အနိစ်စခညျြးပါ။ အဆိုးလဲအမွဲမရှိပါဘူး)
There are plenty more fish in the sea. (တခွားလူတှအေမြားကွီးရှိပါသေးတယျ။ အခဈြကိစ်စခံစားနရေသူကို တခွားခဈြရမယျ့လူတှအေမြားကွီးရှိပါသေးတယျလို့နှဈသိမျ့နိုငျတယျ။)
It's not all doom and gloom. (ဒီလောကျကွီးမဆိုးပါဘူး။ doom and gloom ဆိုတာ အနာဂါတျပြောကျနတော။ မထူးတော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ခံစားမှုမြိုး)
Worse things happen at see (It could bealot worse.) (ဒါတျောသေးတာပေါ့။ ဒီထကျတောငျအမြားကွီးဆိုးသှားနိုငျတာပဲ)
Get over it! (မလေို့ကျစမျးပါကှာ။ ထားလိုကျစမျးပါကှာ)
Just count your blessing. (အကောငျးတှပေဲစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ကိုယျရထားတဲ့ကောငျးကှကျကလေးတှကေိုမွငျကွညျ့တာ။ ဖွတှေေးကွညျ့တာ)
The future is looking brighter (အနာဂါတျကတောကျပလာပွီ)
သူ့မကျြနှာနညျးနညျးကွညျလာပွီဆိုရငျ ရှမှေ့ာဘယျလိုအကောငျးတှလောတော့မယျဆိုတာ အားပေးမယျ။
We've turn the corner. (တို့ တောငျကြျောလာပွီ။ အခကျအခဲကြျောလာပွီ။)
There'salight at the end of the tunnel. (လမျးဆုံးတော့ ရှာတှမှေ့ာပေါ့။ နောကျဆုံးမှာအားလုံးကောငျးသှားမှာပါ။)
Things can only get better. (ပိုကောငျးလာဖို့ပဲရှိတယျ)
It can't get any worse. (ဒီထကျဆိုးဖို့မရှိတော့ဘူး)
I think we've been through the worst of it. (အဆိုးဆုံးတှကေိုကြျောဖွတျခဲ့ပွီးပွီ။)
အောကျကစကားပွောခနျးကိုလလေ့ာကွညျ့လိုကျရငျ ဒီအသုံးအနှုနျးတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ ပိုပွီးသုံးတတျလာပါလိမျ့မယျ။
Gary: My girlfriend dumped melast night. (ရညျးစားကပဈသှားတယျ)
(အရမျးခံစားရတယျ။ ဆိုးတယျ) So I can imagine how you must feel. He was devastated (ယူကြုံးမရဖွဈ)-
Gary: I got firedthis morning . . . (အလုပျဖွုတျခံရသညျ)
Denise: Oh no ... this is tough! And ironic. . . because I just gotaraise. . . (လစာတိုးပေးခံရသညျ) but anyway... Well it obviously can't get any worse.
Denise: Wow, you really are havingarun of bad luck.(ကံဆိုးမှုတှတေသီကွီး) But I'm sure the worst is behind you now.
Erm ... did you see that movie(ကွညျ့လိုကျသေးလား)on TV last night? The one with Jim Carrey. It was hilarious!
I find that really puts things in perspective. (အရှိကိုအရှိအတိုငျးမွငျ)
Let's go forawalk.(လမျးလြှောကျထှကျ)
ကဲဒီလိုဆိုရငျ အားပေးစကားပွောလို့ရပွီပေါ့။ online ကသူငယျခငျြးတှေ facebook မှာ စိတျညဈကွောငျး status တငျထားတဲ့သူငယျခငျြးတှကေို အခုပဲလကျတှေ့ လကေ့ငျြ့ရငျးအားပေး လိုကျကွပါဦး။
Permalink Reply by Soe Soe on December 4, 2012 at 22:36
Thank you for sharing useful lgs.
Permalink Reply by padout,layy on December 5, 2012 at 9:38
really useful .... thanks
Permalink Reply by May Thinzar Thein on December 5, 2012 at 9:56
Dear Ko Zar Ni,
You've gotaheart of gold for sharing this.
And we expect more from you ..
Glad to be friend with you online and offline.
Permalink Reply by 3t02bgdj7xgzc on December 5, 2012 at 10:06
so Nice....thank you
Permalink Reply by Tu Tu Winn Aung on December 5, 2012 at 10:16
noted & useful for us.
Permalink Reply by Thike Htun on December 5, 2012 at 10:38
Permalink Reply by MayMay on December 5, 2012 at 11:00
Permalink Reply by saw eh to on December 5, 2012 at 11:14
Permalink Reply by mahn pyay nyein on December 5, 2012 at 11:51
Permalink Reply by thihazaw on December 5, 2012 at 11:58
I got new words and thanks
Permalink Reply by Sis Sis Aung on December 5, 2012 at 14:02
very useful post ... Thank you so much.
Permalink Reply by Gyit on December 5, 2012 at 14:33
I think we've been through the worst of it.The future is looking brighter. (y)